Master ee Qorshaynta Xuduudaha ee UNAH - Geofumadas
Shahaadada Master ee Qorshaynta Muuqaalka ee UNAH
Master of Planning iyo Land Management bixiyaan Banaan University Qaranka ee Honduras (UNAH), waa barnaamij waxbarasho tan iyo markii la aasaasay ee 2005, ayaa si wadajir ah la Department of Juqraafiga at the University of Alcala soo koraya (Spain) . Wixii su'aal ah oo noo yimid maalmo yar ka hor, wuxuu qaaday fursad ay ku wargeliyaan waxyaabaha aasaasiga ah ee ku saabsan xad this, inkastoo in 2013 hore yihiin dadka Hawiyaha ee geedi socodka of Is-Qiimaynta Xirfadda iyo cusboonaysiiso Barnaamijka Waxbarashada in la bilaabo doono horumarinta cusub ee bartamihii 2013. Waxa kale oo aanu rajaynaynaa in ay u adeegaan karaan sida la gelin jaamacad kale oo ku jirta qorshe ay ku bixiyaan adeeg la mid ah.
Nidaamkan waxaa taageeray Kuliyada astaanta Sciences (wejigooda / UNAH) iyo Waaxda Juqraafiga at the University of Alcala (Spain), wacyi ah aqoonyahanada jaamacadda cilmiga iyo / ama waayo-aragnimo u leeyahay arrimaha maamulka dalka, magaalooyinka iyo qorshaynta dhulka miyiga ah, maamulka khayraadka dabiiciga ah, isticmaalka waara ee dalka, iyo isticmaalka xogta aan ollogga iyo satellite images fog Satlaytaka.
Qalinjabiyaha Master-ka: Qorsheynta iyo Maaraynta Deegaanka, waa xirfadle oo leh tababar khaas ah Sayniska iyo Tiknoolajiyadda Aasaasiga ah.
Waa xirfad u shaqeyn karta Agaasime, Maamulaha ama Maamulaha Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed.
Waa xirfadle codsada uu aqoon is-dhaleeceyn iyo xaaladaha maamulka firfircoon, maamulka hab maamulka dalka iyo awoodda si loo hindiso iyo horumarinta qorshaha sayidkiisa, mashruuc gaar ah, oo aasaasiga ah, cadastral, mowduuc oo mashquuliyo maps baaxadda degaanka, heer degmo, heer gobol iyo heer qaran ah oo loogu talagalay qorshaynta isku dhafan ee dhuleed.
Waxay awoodaan inay la qorsheeyo, loo maareeyo iyo fahmo hawlaha oo ah alaabta geodetic kala duwan iyo qalab iyo software computer for iibka, maamulka, maaraynta, iyo falanqaynta xogta geospatial noqon doonaa.
Isagu waa xirfad leh aragti tababar joogto ah, la xariirta aqoontooda la helay cusub oo lagu sameeyey in ay duurka iyo farsamooyinka afku cusub, fasiraadda iyo falanqaynta xogta geospatial.
Xirfadlaha Master-kan, wuxuu fahmi doonaa masuuliyadda ilaalinta kalsoonida macluumaadka geospatial ee lagu maareynayo beertiisa.
Barnaamijka Master wuxuu ka kooban yahay 19 mawduucyada loo qaybiyay wareegyada 7 ee soo socda:
Ciclo1: Juquraafi iyo aasaaska aasaasiga ah ee Ururka Territorial
CTE-501 Juqraafiga iyo Qorsheynta Maareynta
CTE-502 aasaaska maareynta dhulka
2 Cycle: Geodesy iyo Cartography
CTE-511 Aasaasiyadeedka Geodesy iyo Cartography
CTE-512 Sawirro-gaaban iyo Nidaamyada Geoposka Global
Khariidadaha CTE-513: Layout, Routing, Routing and Print
CTE-514 Farsameynta Aaladaha iyo Daabacaadda Webka
3 Cycle: Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed
CTE-521 Heerarka Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed
CTE-522 Nidaamka Macluumaadka Juqraafi - Raster
CTE-523 Nidaamka Macluumaadka Juquraafiyeed - Sawir
Barnaamijka CTE-524 ayaa lagu dabaqay Deegaanka Nidaamka Macluumaadka Geographic
4 Cycle: Dareenka fog
CTE-531 Mabaadi'da Jirka ee Siyaabaha fog
Xirfadaha CTE-532, Qalabka Dheecaannada iyo Qalabka Lagu Qaadayo (Hyper-Spectral Telemedetection)
CTE-533 Muuqaal Sawiro Sawirro
CTE-534 Sawiridda sawirka iyo tarjumaadda sawirrada
Wareegga 5: Qorshaynta dhulka
CTE-541 Cudurka Dhibaatada - Codsiyada
CTE-542 Qorsheynta Xuduudaha - Codsiyada
CTE-543 Maareynta Xuduudaha - Codsiyada
6 Cycle: Tababar Xirfadeed
CTE-600 Tababar Xirfadlaha ah ayaa lagu dabaqay Qorshaynta Xuduudaha
7 Cycle: Mashruuca Master
Mashruuca Cilmi-baarista CTE-700 (Thesis).
Macallinka waxaa lagu horumariyaa hab muuqaal ah, oo ka kooban:
· Fasallada Virtual (on-line): Maado kasta, ardaydu waxay internetka ku shaqeeyaan ilaa qiyaastii afar asbuuc gudaheeda mashruuc tiknoolajiyadeed oo farsamo (Moodle). Waxay la socdaan professor; kuwaas oo iyaguna siin doona tixraacyada baybalka.
· FasalladaWaayo, koorso kasta ardayda ka qayb casharada fasalka ka 8 adeegeen, oo 00 in 17: saacadood 00, Isniinta ilaa (saacadood 48 total) Saturday.
· Dhaqdhaqaaqyada iyo dhamaystirka hawlaha: Labada fasal iyo fasalada farshaxanka ah ee ardayda waxay horumariyaan dhaqdhaqaaqyo waxqabad leh. Ardaydu waxay leeyihiin qoraallada hawlahaas, iyo sidoo kale sawirrada dayax-gacmeedka, sawirada muuqaalka iyo xogta kale ee SIG-FACES / UNAH. Intaas waxaa dheer, waxay qabtaan hawlo iyo mashruucyo degmooyinka Honduras qaar ka mid ah, iyaga oo faa'iido u leh tababbarkooda iyo dadka degan bulshooyinka.
Cilmi baaris: Ardaygu wuxuu qabanayaa baaritaan asal ah oo uu ku yiraahdo Tutor Tutor, oo hadafkiisu yahay in uu gacan ka geysto abuurista iyo / ama fasiraadda xalalka la soo jeediyay ee dhibaatooyinka qaran iyo / ama gobollada, oo ku dhammaystiran farsamaynta, difaaca iyo ansixinta ee Darajada.
Post Previous«Previous Forum Latin Latin ah oo ku saabsan qalabka la taaban karo ee waxqabadka magaalooyinka
Post Next Koorasyada 2 Cadastre ayaa kor u qaadey OASNext »
5 jawaabta "Master Master Planning Terrace UNAH"
Iveth Levoyer isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan Iveth Levoyer of Ecuador, waxaan ku jiray xiiso Master ah marka la eego mustaqbalkeyga waxaan ahay geographer ah injineer iyo Qorsheeyaha Territorial ka del Pontificia Universidad Catolica ee Ecuador qalin, taasoo doonaysaa waa sayidkaaga ah oo ku saabsan mustaqbalkeyga ciyaareed, laakiin online, haddii aan u caawin kartaa waxaan u mahad ...
Qorshaha sayidku hadda wuxuu u baahan yahay toddobaad waji waji ka waji ah fasal kasta. Ku dhowaad shan toddobaad kasta, waxaa lagama maarmaan ah in la xaadiro fasalka laga bilaabo 8 AM ilaa 5 PM laga bilaabo Isniinta ilaa Sabtida. Tan, maxaa yeelay aqoonyahannada badankood waxay ka yimaadeen dibedda dalka; ka qaybgal koorsada bilowga fasalka ee shakhsiga ka dibna raac nidaamka.
Jorge alejandro valle isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma aan fahmin jadwalka. Imisa saacadood maalintii fasalka?
Waxay socotaa laba sano. Haatan, xayeysiinta afraad ayaa bilaabaneysa, koorsada-daaweynta iyo horudhaca xulashada musharixiinta ayaa soo maray. Hadda waxaad u baahan doontaa inaad sugto xayeysiinta soo socota si ay u bilaabato, suuragalna ah 2016.
dooxada julian isagu wuxuu leeyahay:
Mudo intee leeg ayay tahay shahaadada mastarka iyo waa maxay qiimaheeda, fadlan iigu soo dir macluumaadka emaylkayga. Runtii waan u bogaadinayaa sababtoo ah waxaan jeclahay UNAH